Ny lahatsoratr'i Joe Andrews momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Joe Andrews
Rehefa miroso amin'ny fahombiazana amin'ny taona 2019 isika, lohahevitra iray izay ao an-tsaina indrindra amin'ireo mpivarotra B2B sy mpitarika marketing efa noresahiko dia ny paikadin'izy ireo eny an-tsena. Ny antony ilain'ny mpitantana maro dia ny hoe mikendry ny fizarana tsena sahaza azy ireo ny orinasan-dry zareo ary manao ahoana ny fahavononany hanatanteraka ny paikadin'izy ireo. Fa maninona no olana izany? Ny fananana paikady matanjaka mankany amin'ny tsena dia mifamatotra mafy amin'ny fahombiazan'ny vola miditra. Tamin'ny fanadihadiana farany nataonay momba ny 500
Alarobia 2, 2017 Talata, Aogositra 1, 2017 Joe Andrews
Mihombo haingana ny tsindry amin'ny CMO satria nomena andraikitra mivantana bebe kokoa amin'ny fitomboan'ny vola miditra izy ireo, ao anatin'izany ny teti-bola sy ny loharanom-bolan'ny rafitra hanatanterahana izany. "Tsara," hoy ianao! Ary farany manaja ny mpivarotra. Saingy ny fanamby dia izao izy ireo no tompon'andraikitra bebe kokoa amin'ny famoahana valiny azo refesina - ary haingana. Sakana lehibe amin'ny fahombiazana ny ekipa marketing tsy manana fahaiza-manao ilaina ilaina handrefesana ny fiantraikany amin'ny fitomboan'ny vola miditra ao amin'ny fikambanana (ohatra ny fampahalalana vaovao